အောက်တိုဘာလ 2009 – တေလာ Lopes ツဘလော့
လ: အောက်တိုဘာလ 2009
PHP ကိုအတူ thumbnail ကိုပုံရိပ် Creating | အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ thumbnail
programming ကို PHP ကို: thumbnail ကိုပုံရိပ်များ Generate (thumbnail) သို့မဟုတ်ပင်အချို့စံမှပုံရိပ်များဆိုဒ်ပြောင်းရန်, လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းနှင့်ဘောင်နဲ့တူကြီးမြတ် features တွေနှင့်အတူ, အစပ်, စာသားနဲ့တခြားဆိုးကျိုးများ.
27 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	easyphpthumbnail.class.php, ဆိုးကျိုးများ, ပုံရိပ်, ဆိုဒ်ပြောင်းရန်, image ကိုဆိုဒ်ပြောင်းရန်, thumbnail ကို	58 မှတ်ချက်များ
programming ကို PHP ကို: သငျသညျပေးထားသောအိုင်ပီ၏ပထဝီတည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်သူကလွယ်ကူပါတယ်! နှင့် ipdetails သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်အဖြစ် data တွေကိုရနိုင်, ပြည်နယ်နှင့်မြို့.
25 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	အိုင်ပီ, ipdetails, ပထဝီတည်နေရာ, အရင်းအမြစ် ip	21 မှတ်ချက်များ
ပုံနှိပ်သည့်အခါမမြင်ရတဲ့ div ဖြစ်လာ | CSS ကိုမတူညီပါပုံနှိပ်ပါ
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာတိကျတဲ့အမြင်အာရုံဒြပ်စင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုဒ်ရဲ့ contents တွေကိုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သာ screen ပေါ်မှာမြင်ရလိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပုံနှိပ်သည့်အခါကမမြင်ရတဲ့ကြောင်း. သို့မဟုတ်, ကျနော်တို့ပုံနှိပ်ခြင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်ချင်. CSS ကိုသင်တို့အဘို့ပြုလုပ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်!
24 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	CSS ကို, မမြင်ရတဲ့ပုံနှိပ်သည့်အခါ, မီဒီယာပုံနှိပ်ပါ, ဝှက်ပုံနှိပ်သည့်အခါ	8 မှတ်ချက်များ
က MySQL စားပွဲပေါ်တွင်အခြေခံ PHP ကိုလူတန်းစားမီးစက်
programming ကို PHP ကို: ဒီအထုပ်က MySQL ဒေတာဘေ့စစားပွဲကနေမှတ်တမ်းများသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူပေးနိုင် PHP ကိုအတန်း generate ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
23 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	ClassBuilder, လူတန်းစားဖန်တီး, က MySQL, PHP ကို, စားပွဲ	7 မှတ်ချက်များ
အခမဲ့ Coding နဲ့စာဝှက်စနစ်ဆော့ဝဲ (IEComElt)
၏လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက် (၏)ကြည်းတပ်ဆက်သွယ်ရေးနေဖြင့်အလုပ်ခန့် coding နှင့်အတူ key-ရိုးရှင်းတဲ့, အပေါ်အခြေခံပြီး “IE ကို Com Elt”. ဥပမာအား, “EQTDV MISNE JOAHB” နည်းလမ်း “WELCOME”
21 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	key-ရိုးရှင်းတဲ့, encryption ကို, IE ကို Com Elt, ဖြစ်စဉ်ကိုညွှန်ပြချက်, ပို့စ်များကို, keyword, ရေဒီယိုအော်ပရေတာ, စကားဝှက်ကို	4 မှတ်ချက်များ
17 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	barcode.inc.php, barCodeGenrator, bytescoutbarcode128, ဘား-code ကို	120 မှတ်ချက်များ
HP က Pavilion – XP ကို ​​HD ကိုအသိအမှတျမထားဘူး | cONTROLADA နာရီ
ဒါဟာ XP ကို ​​installation ကိုပေါ်သော, HD ဟုသတင်းစကားပေါ်လာဖြစ်ပျက်ခဲ့ (SATA) ဒါဟာမတွေ့ရှိခဲ့သည်? ဖြစ်ကောင်း controller ကိုယာဉ်မောင်း SATA ၏ကင်းမဲ့နေသည်!
15 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	1 မှတ်ချက်
Web ကို interface ကို အသုံးပြု. Edit ကို INI configuration ဖိုင်များ
programming ကို PHP ကို: အတန်းနှင့်အတူ clsINI သငျသညျစာသားကိုဖိုင်များကို parameters များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် (*.ဒီနည်းကို) Web browser ကိုတစျဆငျ့, လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့.
13 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	မှတ်ချက် Leave
E-mail ကိုရောက်ရှိလာမပါ? ပေးပို့သူပေါ်လစီမူဘောင် – SPF
e-mail ကိုရောက်ရှိလာမပေးကြောင်း e-mail ကို၏ပေးပို့ခြင်းနှင့်သင်အသိပေးစာ programming လိုက်တဲ့အခါ, ထို့နောက်တရားခံ: သငျသညျ SPF ပိတ်ဆို့ခံစေခြင်းငှါ!
12 အောက်တိုဘာလ 2009 တေလာ Lopes	8 မှတ်ချက်များ